Global Voices teny Malagasy » Nisy niditra an-tsokosoko ny Twitter sy vohikala ofisialin’i Korea Avaratra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Janoary 2011 5:28 GMT 1	 · Mpanoratra Lee Yoo Eun Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Korea Atsimo, Korea Avaratra, Ady & Fifandirana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Politika, Teknolojia, Vaovao Mafana
Raha ny hita, dia toa efa nihanalefaka ny fihenjanana nisy teo amin'ny ireo Korea roa tonta, satria dia nanolo-kevitra  ny hifampiresahana i Korea Avaratra tato ho ato. Ao ambadik'izay anefa, mbola mitohy hatrany ireo fanafihana amin'ny alalan'ny aterineto eo amin'izy roa. Tohin'ny fametrahan'ny mpampiasa aterineto iray avy any Korea Atsimo tononkalo manevateva mikasika ny fianakavian'i Kim any Avaratra tao amin'ny vohikala ofisialin'ny Korea Atsimo Uriminzokkiri, dia nanohitra izany fanafihana izany tamina famelezana DDOS (Avy amin'ny mpandika: fanankofonana lohamilina) ny Korea Avaratra.
Androany, dia namely ny kaonty twitter ofisialin'i Korea Avaratra @uriminzok ireo piraty avy any Korea Atsimo, nameno ny timeline tamina teny mahery nandoto ny fianakavian'i Kim, araka ny voalazan'ny mediam-bahoaka any Korea Atsimo Wiki Tree [ko] sy ny media hafa. Mety ho ireo mpampiasa ny aterineto ao amin'ny DC Inside Gallery, iray amin'ireo vohikalam-pianakaviambe malaza any Korea Atsimo, no nahatonga ity fanafihana ity mba ho valifaty amin'ny fanafihan'i Korea Avaratra tamin'ny DDOS tamin'ny vohikala. Omaly, nanakana ity vohikala ity nandritra ny 30 minitra teo ho eo i Korea Avaratra taorian'ny namoahan'ny mpampiasa io vohikala io tononkalo manevateva ny fitondrana tao amin'ny vohikala ofisialin'i Korea Avaratra.
Ny nampirefotra ity fitohitohizana fanafihana ity dia tononkalo manesoeso navoakan'ny mpampiasa ny DC Inside Gallery. Free North Korea Radio , foibenà fampielezampeo ao Seoul, tantanin'ireo mpitsoa-ponenana avy any Korea Avaratra, dia nanambara tamin'ny 4 Janoary fa nisy tononkalo miisa andalana 12, raha topaza-maso dia toa fiderana be ny fianakavian'i Kim kanefa fanevatevana mivantana ny fitondrana Koreana Avaratra tokoa, navoaka tao amin'ny vohikala ofisialin'ny Governemantan'i Korea Avaratra Uriminzokkri teo anelanelan'ny 20-21 Desambra tamin'ny taona lasa teo. Voavakin'olona an-jatony maro izany.
Ny hacker/mpanoratra ity tononkalo ity dia namela ny diany ao amin'ny DC Inside Gallery. Ity pejy antsoina hoe ‘tany masina’ ity dia [ko] nampiseho  ireo fifandraisana misy eo amin'ny mpampiasa ny aterineto, izay manontany ny iray amin'izy ireo hoe ‘afaka miditra an-tsokosoko ao amin'ny vohikala Uriminzokkiri ve aho,’ ary ny iray dia namaly, ‘rehefa miezaka miditra amin'io vohikala io amin'ilay ‘fomba mitsangana’ aho, dia mety.’
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/01/12/11851/
 mediam-bahoaka any Korea Atsimo Wiki Tree: http://wikitree.co.kr/main/news_view.php?id=26724
 Free North Korea Radio: http://www.fnkradio.com/
 Ity pejy antsoina hoe ‘tany masina’ ity dia [ko] nampiseho: http://gall.dcinside.com/list.php?id=north_korea&page=&keyword=&no=7225&k_type=&search_pos=